France Ma Dooneyn Laporte Laakiin Spain Nasiib Ayay Leeyihiin Inay Heystaan Isaga – Garsoore Sports
France Ma Dooneyn…
France Ma Dooneyn Laporte Laakiin Spain Nasiib Ayay Leeyihiin Inay Heystaan Isaga
Daafaca dhexe ee Manchester City wuxuu si joogto ah uga mid ahaa daafacyada ugu fiican yurub laakiin wuxuu noqday 27 jir isagoo aan waligiis kasoo muuqan heer caalami.
Laporte wuxuu u safanayaa xulka kubbada-cagta ee Spain Tartankan Qaramada Yurub markii ugu horreeysay abid oo uu heer caalami kasoo muuqdo kaddib markii uu garab dhaafay waddankii uu ku dhashay ee Faransiiska.
Laporte Wuxuu ku dhashay magaalada Agen ee gobolka Basque ee koonfur-galbeed Faransiiska, balse Laporte ma noqon doono cayaaryahanka kaliya ee Euro 2020 matalaya wadan ka duwan midkii uu ku dhashay, hayeeshee beddelashadiiisa iyo daacad u noqoshada xulkiisa cusub ee Spain ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu muranka badan.
Mar la weeydiiyay ” Ma dareemsantahay inaad tahay Ispaansish kugu filan si aad u difaacdo astaanta, heesta calanka iyo xulkaba?”
Wuxuu ku jawaabay ““Waa su’aal adag laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan uga jawaabo sida ugu macquulsan,” Laporte ayaa ku jawaabay: “Waxaan ku tartami doonaa heerka ugu sarreeya taas ayaa caddeeyn ah.”
Waxaa markii ugu horreysay looga yeeray xulka Faransiiska 2016kii isreebreebka Koobka Adduunka ee Bulgaria iyo Netherlands laakiin wuxuu ku jiray kursiga keydka labada guulba.
Bishii Ogoosto 2019 waxaa soo gaaray dhaawac halis ah oo jilibka ah laba maalmood kaddib markii uu u cayaaray Man City, taasna waxay umuuqatay inay muujineyso dhammaadka rajadiisa inuu ku biiro Les Bleus.
Deschamps ayaa mar horeba si joogta ah u indha indheeyay Laporte iyadoo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan in dagaal shaqsiyan ah uu kala dhaxeeyo, laakiin tababaraha Faransiiska ayaa sidoo kale nasiib u yeeshay inuu heysto daafacyo dhexe oo heer sarreeya uuna uga maarmo Laporte.
Tartanka haatan soconaya ee Euro 2020, wuxuu dambeedyada dhexe u dooran karaa 2 kamid ah daafac Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, Clement Lenglet iyo Kurt Zouma.
Iyadoo Laporte uusan aheyn dooqa koowaad ee City, kaddib markii uu booskiisa u waayay Ruben Dias iyo John Stones oo ku mataanoobay daafaca dhexe ee City, waxay aheyd wax aan macquul aheyn in la arko isagoo qasbaya inuu dib ugusoo laabto qorshihii macalin Deschamps ee Euro-ga.
Taa beddelkeed Spain, waxaa heystay daafac yari baahsan iyadoo Sergio Ramos uusan taam buuxa aheyn halka Gerard Pique oo in badan kaddib soo laabtay, taasoo la micno ah in uu yara jilcanaaday dambeedka dhexe ee kooxdiu awoodda badnayd toban sano kahor.
Waa wax lala yaabo in laacib saameyn intaas la’eg ku yeeshay daafaca Manchester City oo haatan ah mid ka mid ah kooxaha ugu fiican Yurub, uu wajahayo xaalad uu kala dooranayo xulkiisa kubbada-cagta.
Jorginho oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Brazil ayaa ciyaaray kulankii Italy ay ka adkaatay Turkey, ciyaaryahanka aadka loo qiimeeyo ee khadka dhexe ee Jamal Musiala ayaa u ciyaaray England heer dhalinyaro kahor inta uusan gaarin go’aankiisii ugu dambeeyay ee u ciyaarista Jarmalka, halka Declan Rice iyo Jack Grealish ay mataleen Jamhuuriyadda Ireland kahor inta aanay kusoo biirin xulka Ingiriiska.
Waxaa jira tusaalooyin kale oo tiro badan laakiin waxa Laporte ka duwaneysiinaya ayaa ah go’aanka ah inuu daaha ka qaadday goor dambe in uu u safanayo xulka kubbada-cagta Ispaanishka.
Si kastaba ha noqotee, Laporte wuxuu had iyo jeer lahaa tayo uu kaga dhex muuqan karo masraxyadda caalamiga, haatanna La Roja ayaa siisay fursad uu ugu dambayntii ku sameeyo siddaas.
“Waxaan Sameeynayaa Waxaan Doono” – Southgate Oo Farriin Culus U Diray Taageerayaashii Careysnaa Kulankii Scotland
Warbixin Kooban Oo Ku Saabsan Taariikhda Garoonka Muqdisho